Radio Malmala Radio malmala मेलाको अवलोकन गरी स्वदेशी उत्पादनलाई हौसला प्रदान गरौ : अध्यक्ष पाण्डे Radio malmala
मेलाको अवलोकन गरी स्वदेशी उत्पादनलाई हौसला प्रदान गरौ : अध्यक्ष पाण्डे
- कार्तिक ७, २०७५
तेस्रो राष्ट्रिय सैनामैना कृषि पर्यटन तथा औद्योगिक व्यापार मेला भोलीदेखि सुरु हुँदैछ । देश निर्माणमा व्यापारको आवश्यकता व्यवसायिक हित संगै सामाजिक एकता भन्ने मुल नाराका साथ सैनामैना व्यापार संघले आयोजना गर्ने मेला भोलीदेखी कार्तिक १८ गते सम्म सैनामैना ४ मुर्गिया स्थित पर्रोहा माध्यमिक विद्यालय अगाडिको खेल मैदानमा संचालन हुनेछ । औद्यौगिक व्यापार मेला र यससंग जोडिएका अन्य विषयहरुमा रहेर सैनामैना व्यापार संघका अध्यक्ष एवं मेला सचिवालयका संयोजक जिवनाथ पाण्डे संग रेडियो मलमलाका लागि विष्णु खत्रीले गर्नुभएको विशेष कुराकानी :
१.औद्योगिक व्यापार मेलाको तयारी कहाँ पुग्यो ?
महोत्सवको उद्घाटन बिहीबार अर्थात भोली हुँदै छ । महोत्सव पुर्व गनुपर्ने सम्पुर्ण तयारी पुरा भइसकेको छ । मेलाको प्रदेश नं ५ का मुख्य मन्त्री शंकर पोख्रेलले उद्धघाटन गर्नुहुनेछ । अन्य नियमित काम अन्तर्गत बाँकी रहेका कामहरु हुँदैछन् । यस हिसाबले भन्दा हामी महोत्सवको तयारीको अन्तिम चरणमा छौं । प्रचार प्रसारको कामलाई पनि तिव्र रुपमा अगाडी बढाइरहेका छौं । जसका लागि तपाईंहरु जस्ता मिडियाले महत्वपुर्ण भुमिका निर्वाह गरिरहनुभएको छ । महोत्सवलाई भव्य र सभ्य रुपमा सम्पन्न गर्नका लागि विभिन्न उपसमितीहरुले अहिले काम गरिरहनुभएको छ ।
२.औद्योगिक व्यापार मेला आयोजना गर्नुको मुख्य उद्धेश्यहरु के के हुन् ?
विभिन्न वस्तु तथा सेवाहरुको एकै स्थलमा प्रर्दशनी गरी ग्राहकसंग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गरी निकासीयोग्य वस्तुको पहिचान एवं बजार प्रवद्र्धनमा सहयोग पुर्याउनु नै मेलाको मुख्य उद्धेश्य हो । विशेष गरी कृषिजन्य उत्पादनलाई जोड दिँदै बजार प्रवद्र्धन गरी स्थानिय कृषक व्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने अर्को उद्धेश्य रहेको छ । सैनामैना नगर क्षेत्रको पर्यटकीय स्थल,जैविक विविधता,मठमन्दिर,शैक्षिक संस्था तथा बित्तिय संस्थाको प्रचार प्रसार गरी लुम्बिनी जोडी पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पुर्याउने उद्धेश्यले मेलाको आयोजना गरिएको हो । स्थानीय आर्थिक विकाशमा तिव्रता ल्याउनुका साथै महोत्सवमा स्थानिय उत्पादन तथा व्यवसायिक सामानहरुलाई व्यापक प्रचारप्रसार गरि सैनामैना नगरपालिकालाई व्यापार ग्राम “द बिजनेस भिलेज”को रुपमा विकाश गर्नु मेलाको तत्कालिन लक्ष्य हो ।
३.मेलाका मुख्य आर्कषणहरु के के रहेका छन् ?
यस क्षेत्रमा उत्पादित तरकारी तथा फलफुल, साना तथा घरेलु उद्योगबाट उत्पादित वस्तुहरु, हस्तकलाका समाग्री लगायतका कुरा नै यसपालीको महोत्सवको मुख्य आकर्षणहरु हुन् । साथै मेलाको मुख्य आर्कषणको रुपमा अहिले वडा स्तरीय दोहोरी गित प्रतियोगिता,सेल्फी जोन प्रतियोगिता र बम्पर उपहारलाई लिईएको छ । किनकि दोहोरी गित वडास्तरीय हुने भएकाले मनोरञ्जन सहित स्थानिय कलाकारहरुको प्रतिभा उजागर गर्ने एक सुनौलो अवसर प्राप्त हुनेछ भने,सेल्फी जोन प्रतियोगिताले युवा वर्गलाई आकषर््िात गर्नेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छाँै । स्वदेशी तथा विदेशी वस्तुहरुको प्रदर्शन तथा बजारीकरण गरिने छ, भने मेलामा विद्यालय स्तरीय नृत्य प्रतियोगिता,डान्सिङ आईडल, मम्मी डान्स, बृहत सांस्कृतिक कार्यक्रममा राष्ट्रिय तथा स्थानिय कलाकारहरुको बेजोड प्रस्तुति रहनेछ ।
४.यस क्षेत्रको औद्योगिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको विकाशको निम्ति मेलाले कस्तो भुमिका निर्वाह गर्ला ?
नयाँ उद्योग तथा व्यवसायका लागि यो मेला एउटा सुनौलो अवसर हो । यस औद्योगिक मेलामा व्यापार प्रवद्र्धनको लागि धेरै कामहरु हुनेछन्् । उद्योगहरुले आफ्ना उत्पादनबारे जानकारी दिने स्थलको रुपमा मेलालाई प्रयोग गर्नेछन् । पर्यटकीय एव धार्मिक महत्व बोकेका पर्रोहा परमेश्वर बोलबम धाम,थारु होमस्टे,ऐतिहासिक रानिकुवा,बोलबम पर्यटकीय हिलपार्क,मलमला मन्दिर लगायतका पर्यटकीय स्थललाई राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय रुपमा चिनाउनमा महत्वपुर्ण भुमिका खेल्छ । साथै प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरुको बजार रणनीति, स्थानिय उत्पादनमा गुणात्मक सुधार गरी बजार क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनमा सहयोग पुग्नेछ । आधुनिक एवं नँया प्रविधि,उपकरण एवं मेशिनका बारेमा जानकारी गराउनमा मद्धत पुग्नेछ । जसले गर्दा उद्योग व्यवसायलाई समयसापेक्ष परिमार्जित गर्दै लैजान्छ र उद्योग व्यवसायको विकास तथा प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्छ ।
५.दिन सम्म चल्ने व्यापार महोत्सव कसरी सफल बन्न सक्ला ?
कार्तिक ८ गतेदेखी १८ गते सम्म संचालन हुने मेला आफैमा एक चुनौतिको विषय हो । तर पनि चुनौतिहरुलाई सामना गरेर अघि बढ्ने छु । मेला सफल बनाउन सर्बप्रथम त दर्शकको साथ नै आवश्यक पर्दछ । सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्थाहरु, सैनामैना बासी,छिमेकी गाउँपालिका,सुरक्षा निकाय,संचारकर्मी सबैको सहयोगले नै मेला सफल बन्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ । काम गर्दै जाँदा कमी कमजोरी,त्रुटिहरु अवश्य हुन्छन् । यद्यपि ,मेलाको सन्दर्भमा आएका सुझावहरुलाई आत्मसात गरेर सुधार गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ ।
६.कति दर्शकहरु महोत्सव अवलोकनका लागि आउँछन् भन्ने अनुमान छ, आर्थिक कारोबार कति होला ?
११ दिन सम्म चल्ने महोत्सवमा १० करोड बराबरको आर्थिक कारोबार हुने लक्ष्य राखेका छौं । यस्तै डेढ लाख सम्म मानिसले महोत्सवको अवलोकन गर्छन् भन्ने हाम्रो अनुमान छ ।
७.तेस्रो सैनामैना व्यापार मेलाको व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ ?
मेलाको व्यवस्थापनका लागि विभिन्न उपसमितीहरु बनाएर काम गरिएको छ । सबै साथीहरुले आ आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुभएको छ । मेला अवधिभर सुरक्षाको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देही,जिल्ला प्रहरी कार्यालय भैरहवा,ईलाका प्रहरी कार्यालय रन्यौरा मुर्गिया,ईप्रका सालझण्डी,सालझण्डी आर्मी क्याम्प,रानिबगिया आर्मी क्याम्पले सुरक्षा प्रदान गर्नेछ भने, व्यापार संघको तर्फबाट पनि आन्तरिक सुरक्षा गार्डको व्यवस्था मिलाएका छौँ । यसैगरी सचिवालय देखी स्टल, पिङ ,कलाकारको हरेक क्षेत्रमा जिम्मेवारी बाँडफाँड गरीे कार्य गरेका छौ । जसले गर्दा मेला अवधिभर सहज ढंगबाट कार्य हुनेछ भन्नेमा विश्वस्त छु ।
८.अन्त्यमा, औद्योगिक मेलाको सन्दर्भमा केही कुरा जोड्न चाहनुहुन्छ ?
हाम्रो जस्तो अल्पविकसित देशमा व्यापारिक मेलाहरुको ठूलो महत्व हुन्छ । नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकको निमित्त यस्तो मेला महत्वपूर्ण रहने गर्दछ । मेलामा स्थानीय उत्पादनदेखि स्वदेशी उत्पादनका साथै विभिन्न विदेशी उत्पादनलाई पनि प्रदर्शन गर्नेछाँै । मेलामा बिक्री भएको टिकट मध्ये प्रति टिकटबाट रु. १ रुपैँयाका दरले सामाजिक कार्यमा खर्च गरिने भएको हुँदा मेलाको अवलोकन गरी अवसरहरुको बारेमा जानकारी हासिल गर्न अनुरोध गर्दछु । समग्र सैनामैनाको आर्थिक समृद्धि र पहिचानका लागि महोत्सवको आयोजना गरिएको हुँदा सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेको छु । सबैजनाले मेला अवलोकन गरी मेलाको बारेमा सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रिया दिनुहुन पनि अनुरोध गर्दछु । तपाईंको अवलोकनले व्यवसायीलाई प्रेरणा तथा उत्प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छ ।